Dawlada Emaaradka oo Wada Sidey U Burburin Lahayd Dawlada somaliya, iyadoo Adeegsanaysa Laaluush ⋆ Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey
Dawlada Emaaradka oo Wada Sidey U Burburin Lahayd Dawlada somaliya, iyadoo Adeegsanaysa Laaluush
Dawlada Imaaradka khaasatan imaarada Abudhabi oo hogaamiyo ninka Lagu magacaabo Maxamed Bin zaa’id.
Ninkan ayaa ciidamo soomaali ah oo isaga si toosa uga amarqaata kusamaysatay xero milateri oo ka furtey magaalada muqdisho. Ciidankan ayaa la tuhunsanyahay iney iqtiyaalaad ka fuliyaan gudaha somaliya.
Wuxuu kaloo uu siiyey maamul goboledka ssoomaaliland lacag laaluusha wuxuuna ka furtey xero ciidamo soomaaliyeed lagu tabobarayo oo aysan qof somaliya oo madaxi uusan geli karin, lana garaneyn waxa ciidankaas lagu sameyndoono.
Ninkani wuxuu kaloo la wareegey dekadaha Berbera iyo Boosaaso kuwaas oo uu ka dhigi doono sidii uu u xidhay dekedii cadan intaan dagaalku wadankaasu ka dhicin. Dekedaas buu wuxuu heystey mudo tobon sano ah, markuu la wareegey waxaa kasoo degi jirey sandkiiba shanboqol oo kun oo konteynar bacda 10 sano kadibna waxey kusoo uruurtey wax ka yar tobonkun oo konteynar.
Dawlada Jabuuti ayaa iyadu marley aragtey in imaaraadku rabo inuu si khiyaano ah u xidho dekadooda iska ceydhiyey.
Dawladan ayaa yoolkeedu yahay iney xidho dhamaan dekedaha ku dhowdhow si dekadooda Jabal Cali oo kelya ay Zoonahan oo dhan uga shaqeyso.
Dekadii berbera intayan heysan lix bilood waxey ku dhowdahay iney durbaba xidhanto iyo alaabtii oo shacabkii kala bixi kari la’yihiin.
Hadii aysan dawlada somaliya Qaban ninkan u adeega Natanyahuga Israa’iil soomaaliya waxey dib ugu noqonaysaa godkii madoobaa ee dagaalada sokeeye ee is xasuuqa.